Srebrnika - Sırpça - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: srebrnika (Sırpça - Birmanca)
I svakome dade po dve haljine,aVenijaminu dade trista srebrnika i petore haljine.
အစ်ကိုရှိသမျှတို့အားလည်း အဝတ်လဲစရာဘို့ပေး၏။ ဗင်္ယာမိန်အားလည်း၊ ငွေအကျပ်သုံးရာနှင့် အဝတ် လဲစရာဘို့ အဝတ်ငါးစုံကို ထပ်၍ ပေး၏။
I reèe: ta æete mi dati da vam ga izdam? A oni mu obrekoe trideset srebrnika.
အကျွန်ုပ်သည် ယေရှုကို ကိုယ်တော်တို့လက်သို့အပ်လျှင် အဘယ်မျှလောက်ပေးပါမည်နည်းဟု လျှောက်သော်၊ ထိုသူတို့က ငွေအကျပ်သုံးဆယ်ပေးမည်ဟု ဝန်ခံကြ၏။
Tada videvi Juda izdajnik Njegov da Ga osudie raskaja se, i vrati trideset srebrnika glavarima svetenièkim i stareinama
ထိုအခါ ကိုယ်တော်ကိုအပ်နှံသော ယုဒရှကာရုတ်သည် ကိုယ်တော်၌ သေပြစ်ကို စီရင်ကြသည်ကို သိမြင်လျှင်၊ နောင်တရ၍ ငွေသုံးဆယ်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ လူအကြီးအကဲတို့၌ ပြန်ပေး၍၊
Vinograd imae Solomun u Valamonu; dade vinograd èuvarima da svaki donosi za rod njegov po hiljadu srebrnika.
ဗာလဟာမုန်ပြည်၌ ရှောလမုန်မင်း၏ စပျစ် ဥယျာဉ်တဆူရှိ၏။ ဥယျာဉ်စောင့်တို့၌ ငှါးသဖြင့် သူတို့ သည် အသီးကို စားရသည်အတွက် ငွေတထောင်စီ ဆက်ရကြ၏။
I reèe mi Gospod: Baci lonèaru tu èasnu cenu kojom me procenie. I uzevi trideset srebrnika bacih ih u dom Gospodnji lonèaru.
ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ထိုငွေကို အိုးထိန်း သမားရှေ့မှာ ပစ်ချလော့။ ငါ့ကို အဘိုပြတ်၍ ငွေများလှ သည်တကားဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုငွေသုံးဆယ် ကို ငါယူ၍ ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်၌ အိုးထိန်း သမားရှေ့မှာ ပစ်ချ၏။
Tada se izvri ta je kazao prorok Jeremija govoreæi: I uzee trideset srebrnika, cenu cenjenoga koga su cenili sinovi Izrailjevi;
ပရောဖက်ယေရမိဟောသည်ကား၊ ဣသရေလလူတို့သည် အဘိုးပြက်သောသူ၏ ကိုယ်ဘိုးငွေသုံး ဆယ်ကို သူတို့သည် ယူ၍ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကို မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊
Ali on opet dade srebro materi svojoj,amati uze dvesta srebrnika i dade zlataru,aon naèini od njega lik rezan i liven, te bee u kuæi Miinoj.
သို့ဖြစ်၍ ငါ့သားအား ယခု ငါပြန်ပေးမည်ဟု ဆိုသော်လည်း၊ သားသည် ထိုငွေကို အမိအား ပြန်ပေး၏။ အမိသည်လည်း နှစ်ပိဿာကိုယူ၍ ပန်းတိမ်သမား၌ အပ်သဖြင့်၊ သူသည် ထုသောရုပ်တုနှင့် သွန်းသော ရုပ်တုကိုလုပ်၍ ရုပ်တုတို့သည် မိက္ခာအိမ်၌ ရှိ၏။
I rekoh im: Ako vam je drago, dajte mi moju platu; ako li nije nemojte; i izmerie mi platu, trideset srebrnika.
တဖန် ငါက၊ ငါရထိုက်သော အခကို ပေးအံ့ သောငှါ၊ သင်တို့သည် အလိုရှိလျှင် ပေးကြလော့။ အလို မရှိလျှင် မပေးကြနှင့်ဟုဆိုသော်၊ သူတို့သည် ငါ့အား အခပေးအံ့သောငှါ ငွေသုံးဆယ်ကို ချိန်ကြ၏။
Pa kad trgovci madijanski behu pored njih, oni izvukoe i izvadie Josifa iz jame, i prodadoe Josifa Ismailjcima za dvadeset srebrnika; i oni odvedoe Josifa u Misir.
ထိုအခါ၊ မိဒျန်အမျိုးသား ကုန်သည်တို့သည် ခရီးသွားကြစဉ်တွင်၊ အစ်ကိုတို့သည် ယောသပ်ကို တွင်း ထဲက ဆွဲတင်ပြီးလျင်၊ ငွေအကျပ်နှစ် ဆယ်အဘိုးနှင့် ဣရှမေလလူတို့အား ရောင်း၍၊ ထိုသူတို့သည် ယောသပ် ကိုအဲဂုတ္တုပြည်သို့ ဆောင်သွားကြ၏။
A Miha mu reèe: Ostani kod mene, i budi mi otac i svetenik,aja æu ti dati deset srebrnika na godinu i dvoje haljine i hranu. I otide Levit k njemu.
မိက္ခာက၊ အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ နေပါ။ အကျွန်ုပ်၏အဘ၊ အကျွန်ုပ်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်ပါ။ အကျွန်ုပ်သည် တနှစ်တနှစ်လျှင် ငွေအကျပ်တဆယ်နှင့် အဝတ်စုံကို၎င်း၊ စားစရာကို၎င်း ပေးပါမည် ဟု ပင့်ဘိတ်သောအခါ၊ လေဝိဘူသည် ဝင်၍၊-
I dodjoe k njoj knezovi filistejski i rekoe joj: Prevari ga i iskuaj gde mu stoji velika snaga i kako bi smo mu dosadili da ga sveemo i savladamo;ami æemo ti dati svaki po hiljadu i sto srebrnika.
ဖိလိတ္တိမင်းတို့သည် ထိုမိန်းမဆီသို့ လာ၍၊ ရှံဆုန်၌ ကြီးသော ခွန်အားသည် အဘယ်အရာအားဖြင့် တည်သနည်း၊ သူ့ကို ချည်နှောင်၍ နှိပ်စက်ခြင်းငှါ အဘယ်သို့ တတ်နိုင်မည်နည်းဟု သူ့ကို ချော့မော့၍ စူးစမ်းပါ။ ငါတို့သည် ဝိုင်း၍ ငွေဆယ်တပိဿာကို ပေးမည်ဟု ဆိုကြ၏။
စာရာကိုလည်း သင်နှင့်သင့်အပေါင်းအဘော်တို့ အဘို့ မျက်နှာဖုံးများကို ဝယ်စရာဖို့ သင်၏မောင်အား ငွေတထောင်ကို ငါပေးပြီဟု အမိန့်ရှိသဖြင့် သူသည် လည်း အရာရာ၌ အဆုံးအမခံရ၏။
On reèe materi svojoj: Hiljadu i sto srebrnika, to su ti ukradeni, za koje si klela i govorila preda mnom, evo, to je srebro u mene, ja sam ga uzeo. A mati mu reèe: Gospod da te blagoslovi, sine!
သူသည် အမိအား၊ အိုအမေ၊ ပျောက်သောငွေ၊ အကျွန်ုပ်ရှေ့မှာ ကျိန်ဆဲသော စကားကို ပြောသော ငွေဆယ်တပိဿာသည် အကျွန်ုပ်၌ ရှိပါ၏။ အကျွန်ုပ်ယူမိပြီဟု ဆိုသော်၊ အမိက၊ ငါ့သား၊ ထာဝရ ဘုရားကောင်းကြီး ပေးတော်မူပါစေသောဟု ဆို၏။-
A kad vrati hiljadu i sto srebrnika materi svojoj, reèe mati njegova: To sam srebro posvetila Gospodu iz svoje ruke za tebe, sine moj, da se naèini od njega lik rezan i liven; zato ti ga sada dajem natrag.
ထိုငွေဆယ်တပိဿာကို အမိအား ပြန်ပေးသောအခါ၊ အမိက၊ ငါ့သားသည် ထုသောရုပ်တုနှင့် သွန်းသော ရုပ်တုကိုလုပ်စရာဘို့ ဤငွေရှိသမျှကို ထာဝရဘုရားအား ငါပူဇော်နှင့်ပြီ။
exacuere gladium (Latince>İngilizce)i love you jesus (İngilizce>Hintçe)nerpinchu naku (Telugu>İngilizce)eine krone basteln (Almanca>İngilizce)no one notices your tears (İngilizce>Hintçe)íîâåéøàÿ (İngilizce>Rusça)kwaliteitslabel (Hollandaca>Fransızca)likewise tagalog (İngilizce>Tagalogca)habrán mitigado (İspanyolca>Çince (Modern))happy kiddo (İngilizce>Tagalogca)mataba ka (Tagalogca>Kebuano)agnitionalis (Latince>Fransızca)orate pro anima eckbert (Latince>Fransızca)nutrient pool (İngilizce>İtalyanca)सेक्सी विडियो (Japonca>İngilizce)jefremove (Sırpça>Ermenice)transaction id (İngilizce>Hintçe)kasingkahulugan ng tumpok (Tagalogca>İngilizce)pasubaling (Tagalogca>İngilizce)töötage (Estonca>İngilizce)ru busy now (İngilizce>İspanyolca)blue picture video hd hindi blue video (Hintçe>İngilizce)vocare pulvare, (Latince>İngilizce)mundalochane meaning in english (Kannada>İngilizce)themisali (Latince>Rusça)